မိုးရာသီ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးရေး လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အရိပ်ရ?? - Yangon Media Group
မိုးရာသီသစ်ပင် စိုက်ပျိုးရေး လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ဧရာဝတီဘဏ်နှင့် Explorer Marketing + Communication တို့ ပူး ပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အရိပ်ရသစ်ပင် ငါး သောင်းကို ဇွန် ၂၂ ရက်မှစတင်၍ စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြောင်း ဧရာဝတီဘဏ်မှ သိရသည်။
”၂ဝ၁၈ မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးရေး လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ဧရာဝတီဘဏ်နဲ့ Explorer Maketing + Communication တို့ပူးပေါင်းပြီး အရိပ်ရသစ်ပင် ငါးသောင်းစိုက်ပျိုးသွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ကျောင်း တွေ၊ ဘုရားစေတီ ပရိဝုဏ်တွေအတွင်း စိုက်ပျိုးသွားမှာပါ”ဟု ဧရာဝတီဘဏ်မှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်ဇော်က ပြောသည်။ စိမ်းလန်းစိုပြည်သာယာလှပ စေရေး၊ ရာသီဥတု သမမျှတစေရေး၊ ကမ္ဘာမြေကို အမွေပေးနိုင်ရေး စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ယခုကဲ့ သို့ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မိုးရာသီသစ်ပင် စိုက်ပျိုးရေး လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီဘဏ်နှင့် Explorer Maketing + Communication တို့ ပူးပေါင်းစိုက်ပျိုးမည့် အရိပ် ရသစ်ပင် ၅ဝဝဝဝ ကို မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ ကျောင်းများ၊ ဘုရားစေတီပရိဝုဏ် များအတွင်း ဇွန် ၂၂ ရက်မှစတင် ၍ စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။ ဧရာဝတီဘဏ်နှင့် Explorer Maketing + Communication တို့ ပူးပေါင်း၍ မိုးရာသီစိုက်ပျိုး ရေးလှုပ်ရှားမှု ဖွင့်ပွဲအနေဖြင့် မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ် (၇၃)လမ်းနှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ထောင့်ရှိ MIIT ကျောင်းတွင် ဇွန် ၂၂ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက အ ရိပ်ရသစ်ပင် တစ်ထောင်ကျော်နှင့် ညနေပိုင်းတွင် မန္တလေးစွယ်တော် ဘုရားအတွင်း၌ အပင် ၆ဝဝ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်၏ မော်ကွန်းကျောက်စာတိုင?
သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့ မည့်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌနေရာ အတွက် လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်မောင် ကိုပင် ဆက်လက
တောင်ကြီးမြို့လယ်တွင် လက်လုပ်မိုင်းတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် သက်မဲ့ပြုလုပ် ရှင်းလင်းခဲ့ရ